Home » News & Events » दाँत तथा मुख स्वस्थ हुनु भनेको शरीर स्वस्थ हुनु हो, दिनको दुई पटक ब्रस गर्नु अनिवार्य : डा. महर्जन
मिलेनियम स्माइल्सकी मेनेजिङ डाइरेक्टरसमेत रहेकी डा. महर्जनले भनिन्, ‘हाम्रो दाँतको ग्याप छ कोट्याउन थालेपछि झन बढ्छ । त्यसपछि खानेकुराहरु पनि बढी नै अड्किन थाल्छ । सिन्काले दाँत कोट्याउँदा गिजाहरुमा असर गर्छ । डेन्टल फोस भन्ने हुन्छ त्यो लगाउँदा राम्रो हुन्छ । मानिसहरुमा के भ्रम छ भने दाँत धेरै ब्रस गर्नु हुँदैन ।’ प्रस्तुत छ डा. महर्जनसँग काठमाडौंपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । आमाले बच्चालाई दुध चुसाएपछि गिजा सफा नगरी बच्चालाई सुताउने गर्नुहुन्छ । त्यसो गर्नु राम्रो होइन । राती बच्चालाई दुध खुवाएर मुख सफा नगरी सुताउनु हुँदैन । गिजामा र दाँतमा दुधको कस बसेको हुन्छ । त्यहीबाट बच्चामा क्याभिटिज हने समस्या देखिन्छ ।कतिपयले बच्चाहरुलाई हनी हालेर बोतलमा चुसाउनु दिनुहुन्छ अनि त्यो रातभरी बच्चाले चुसेर निदाउँछ । बच्चालाई दुध चुसाएपछि सफा कपडाले औंलामा बेरेर गिजा पुछिदिने गर्नुपर्छ । यसमा बच्चाको आमा र बाबाले धेरै केयर गर्नुपर्छ । दाँत नउम्रेको नानीहरुको गिजा पुच्छ्ने गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।
रिफ्रयाक्टिभ सर्जरीमा रमाइरहेका डा. शाश्वत
मधुमेह उपचारमा नयाँ आधार
Fax: (977 1) 5547196
© Copyright 2006 - 2020 Alka Hospital | All rights reserved